गरिब देशलाई धनी मुलुकले खोप सहयोग गर्नुपर्ने डब्लुएचओ प्रमुखको भनाइ | प्रदेश पालिका
गृहपृष्ठ विश्व गरिब देशलाई धनी मुलुकले खोप सहयोग गर्नुपर्ने डब्लुएचओ प्रमुखको भनाइ
गरिब देशलाई धनी मुलुकले खोप सहयोग गर्नुपर्ने डब्लुएचओ प्रमुखको भनाइ
१ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०७:५७
विश्वका धनी देशहरुले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप दिने योजना तत्कालका लागि पछि सोरेर गरिब देशहरुलाई सहयोग गर्नु पर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले बताएको छ ।
विश्वका गरिब देशहरुमा अति जोखिममा रहेका वर्गहरुले नै खोप नपाएको अवस्थामा महामारी नियन्त्रणमा लिने प्रयोजनका लागि धनी देशहरुले सहयोग स्वरुप खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने डब्लुएचओका प्रमुख डा. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोसले बताएका हुन् ।
खोपको समानुपातिक पहुँचका लागि थालिएको कोभ्याक्स अभियानमा धनी देशहरुले खोपको थप मात्रा प्रदान गर्नु पर्ने डा. टेडरोजले शुक्रबार बताए । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको वितरण गम्भीर रुपमा असमान रहँदै आएको छ ।
धनी देशहरुले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई पनि खोप लगाउने तयारी गरेका छन् । तर गरिब देशहरुमा भने अग्रपंक्तिमा खटिएका तथा अति जोखिमको वर्गमा रहेकाहरुले नै खोप लगाउन पाएका छैनन् ।
गएको डिसेम्बरमा खोप लगाउन थालिएयता विश्वमा उत्पादन भएका खोपहरुको अधिकांश मात्रा धनी देशले किनिसकेका छन् । जेनेभामा शुक्रबार भएको भर्च्युअल कन्फ्रेन्समा डा. टेडरोजले केही देशहरुले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई पनि खोप दिन किन चाहिरहेका छन् भन्ने बुझे पनि तत्कालका लागि गरिब देशलाई सहयोगका लागि सोच्न आग्रह गर्ने बताए ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति जो बाइडेनले जति सक्दो चाँडो १२ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई पनि खोप लगाउने योजना बनाएका छन् । उनले आउँदो जुलाई ४ सम्म कम्तीमा ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोपको कम्तीमा एक मात्रा लगाउने लक्ष्य लिएका छन् ।
क्यानडाले फाइजरको खोप १२ देखि १५ वर्षसम्मका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीले पनि लगाउन पाउने गरि स्वीकृत गरेको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)
Previous articleआजदेखि कर्णाली प्रदेश अस्पतालले थप संक्रमित भर्ना नलिने
Next article२४ घन्टामा ४ हजारभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
चिनियाँ रोबोटले पठायो मंगलबाट आफ्नो ‘सेल्फि’ सहितका तस्वीर